လူသားတို့၏အထီးကျန်ဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကုစားပေးခြင်း | God's Cure for Man's Loneliness | Real Conversion
၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလ၁၆ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျေလိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ဟော ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
ကျွန်ုပ်သည်၊ နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်တိုင်တိုင်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ ပထမ တရုတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၏ အသင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ တီမောသေလင်းသည် ၎င်းတရုတ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်၏ လက်ဦး သင်းအုပ် ဆရာကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆရာကြီးသည်၊ ဘတ်ဂျုံးတက္ကသိုလ်၌ သမ္မကျမ်းစာဆိုင်ရာ ဓမ္မဗေဒနှင့် ဘာသာစကားကို သင်ကြားယင်း၊ ၎င်းအသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တခါတုန်းက၊ ထိုဆရာကြီး သင်ကြားပေးခဲ့သော မြောက်များစွာသော ဓမ္မဗေဒနှင့် ပါတ်သက်၍ ယနေ့တိုင် သိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဆရာကြီးက တရားဟောကြားခြင်း အကြောင်းကို အထူးသဖြင့် သင်ကြားပေးခဲ့၏။ ဆရာကြီး ပြောကြားသည်မှာ၊
သင်းအုပ်ဆရာတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက်ကြီးမားပြီး ခက်ခဲ့သောအရာ သည် သံသယကင်းရှင်းလျက်၊ ဘုရားသခင်၏ သတင်းစကားကို တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင် ဟောကြားဖို့ဖြစ်သည်။ တခါတရံကြာသပတေး၌လည်း ဟောကြား ဖြစ်သည်၊သည့်တိုင်အောင် ၎င်းဒေသနာတော်သည် နားထောင်သူအဖို့မှုန်ဝါး ဝါးရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ (ထိုသို့)ဖြစ်ရခြင်းကား၊ သင်းအုပ်တို့သည် ပြင်းထန် စွာအစာရှောင် ဆုတောင်းရန်လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစာရှောင်ဆု တောင်းသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်မျက်စိ ပွင့်လင်းလာပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်တတ်ရန်ပို၍ ရှင်းလင်း လာပါသည်။ ဤသည် ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံအရ ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, p.23).
ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်း ကျေးဇူးမကြာသေးခင်က ကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ပြီးပါ ပြီ။ အခက်အခဲမရှိဘဲ၊ တရားဒေသနာတော်တပုဒ်စီကို အပတ်တိုင်း ဘယ်လိုပြင်ဆင်ဟော ကြားခဲ့သနည်း¿ဟူ၍ မေးခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သက်သက်ပါ ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်! အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အစပြု၍ တရားဒေသနာတော်ကို ပြင်ဆင်ပြောကြားရာတွင် လွယ်လင့်တကူ ရှိစေခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်လည်း ထင်ပါသည်။ အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် အထံတော်က ကျေးဇူးတော်ကိုပို၍ နက်နဲစွာ ခံစားလာပါသည်။ တရား ဒေသနာတော်ကိုလည်း၊ ပို၍ နက်နဲစွာ ပြောဟောလာစေပါသည်!
ထိုသို့ လွန်ခဲ့သော အပတ်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း တရားဒေသနာတော်အတွက် အချိန်များစွာ အသုံးပြု၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်း တရားဒေသနာတော်အတွက် အကြံအိုက်နေဆဲဖြစ်ခဲ့၏။ ဘုရားသခင်က “မစိုးရိမ်နှင့်”ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ “ညနေပိုင်းတရားဒေသနာတော်ကို ပြင်ပြီးနောက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းအတွက် တရားဒေသနာတော်ကို ငါညွှန်ကြားပေးမည်”ဟူ၍ ပြောပါသည်။ နာမတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းရှိပါစေ! ထိုကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ကျွန်ုပ်၌ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်!
တနင်္ဂနွေညနေပိုင်း တရားဒေသနာတော် ပြင်ဆင်ပြီးချက်ချင်း နောက်တနင်္ဂနွေနေ့ နံနံပိုင်းအတွက် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်ပျက်လာပါသည်။ တနင်္ဂနွေညနေ အတွက် တရားဒေသနာတော်ကို ပြင်ဆင်းပြီး နောက်အိမ်ရှေ့ဘက်ခန်း၊ နေ့လည်စာစား ရန်သွားခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်စာစားနေချိန်တွင် သတင်းကို တီဗွီမှနားထောင်လေ့ရှိသည်။ ထူးဆန်းဖွယ်၊ ဘယ့်တော့အခါမှ မကြည့်ဖြစ်သော ရုပ်သံလှိုင်းကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ် တွင် ဂျော့ခ်ျဘာဗါလီဆီယာ သီချင်း သီဆိုနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်။
သင့်အပြစ်များကို ခွန့်လွှတ်လျှက် အသစ်သောအသက်တာပေးသနား
(“'It Is No Secret” by Stuart Hamblen, 1908-1989).
ကျွန်ုပ်ဇနီးလည်း ၎င်းဓမ္မသီချင်း နားထောင်ဖို့၊ ဧည့်ခန်းဆီသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ ကယ်လိုရာဒို၊ ဒန်ဗါမြို့၌ ထုတ်လုပ်သော ဗီဒီယိုအဟောင်းပင်ဖြစ် သည်။ တခါတလေတောင်မှ မသိခဲ့ဖူးသော ရုပ်သံလှိုင်းကို ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာဂ ရေဟမ်သည် အထီးကျန်ဆန်နေခြင်းဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို ၎င်းရုပ်သံလှိုင်းမှ ဟောကြားနေပါသည်။ ချက်ချင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းဒေသနာတော်ကို ဒီကနေ့နံနက် ၌ ဟောကြားရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်! ကျွန်ုfပ်အမျိုးသမီးကလည်း အတည်ပြုပြောကြား သည်မှာ “ရောဘတ်နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ မဖြစ်မနေ ၎င်းဒေသနာတော်ကို ဟောပါ” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မစ္စစ်ဟိုင်မာက တခါမှ ညွှန်ကြားခြင်းမရှိ။ အထူ ;သဖြင့် ၎င်းဒေသနာတော်ကို ဘုရားကျောင်း၌ ဟောကြားပေးဖို့ ညွှန်ကြားထား ပါသည်။ သူပြောသမျှကိုလည်း ကျွန်ုပ်နားထောင်နေလျှက်ပါ။ သူပြောသမျှလည်း ကျွန်ုပ်အတွက် အမှန် တရားတွေချည်းမို့လို့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤသည် မစ္စတာဂရေဟမ်၏ ကြော်ကြားသော တရားဒေသနာတော် ဖြစ်သော အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဟူသော ဒေသနာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဆာလံ၁၀၂း၆-၇ကို မတ်တပ်ရပ်လျှက် အတူဖတ်ကြပါစို့၊
ဓ“အကျွန်ုပ်သည် လွင်ပြင်၌နေသော ဝံပိုကဲသို့၎င်း တော၌နေသောဇီးကွက် ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏ အကျွန်ုပ်သည် အိမ်မိုးပေါ်မှ တစ်ကောင်တည်း နေရသော ငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ စောင့်လျှက်နေရပါ၏” (ဆာလံ၁၀၂း၆-၇)။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပါတ်သက်၍ ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ်မှတ်ချက်ပေး ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂီးလ်ပြောကြားသည်မှာ၊
ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အိမ်ခေါင်မိုးသည် ကျယ်ပြန့်ညီညာလျှက်ရှိသည်၊ ဤနေရာ၌ ငှက်တို့သည် ညအခါတွင် တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်ဆန် လျှက်နားခိုကြပါသည်၊ ၎င်းတို့ကို ဆာလံဆရာက (နှိုင်းယှဉ်)ပြောကြား သည်မှာ၊ သူ့၏အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟတို့၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို အထီး ကျန်စွာ ခံစားကြရ သူတို့ဖြစ်ကြသဖြင့် (ဝမ်းနည်းအထီးကျန်)သော အတိုင်းအဝန်းများဖြစ်ကြ၏၊ ထိုသူတို့သည် ဝမ်းနည်း ပူဆွေးလွမ်းဆွတ် ခြင်းအခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ပြသကြခြင်းဖြစ်ကြသည်ဟု ဆို၏။ (Jသ့ည Gငူ. D.D.ယ (John Gill. D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume IV. p. 127; note on Psalm 102:6-7).
“အကျွန်ုပ်သည် လွင်ပြင်၌နေသော ဝံပိုကဲသို့၎င်း တော၌နေသောဇီးကွက် ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏ အကျွန်ုပ်သည် အိမ်မိုးပေါ်မှ တစ်ကောင်တည်း နေရသော ငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ စောင့်လျှက်နေရပါ၏” (ဆာလံ၁၀၂း၆-၇)။
လွင်ပြင်၌နေသော ဝံပိုငှက်ကဲသို့၎င်း၊ တော၌နေသော ဇီးကွက်ကဲ့သို့၎င်း-ယနေ့များစွာသော လူငယ်များ အထီးကျန်ဆန်နေကြပါသည်။ အိမ်မိုးပေါ်၌ အထီးကျန် ဆန်နေသော စာငှက်အလား၊ ကောလိပ်ကျောင်းသား^သူများစွာတို့ အထီးကျန်ဆန်နေ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေကြရပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်လူငယ် များနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသား အရွယ်လူငယ်တို့ထံသို့ ငါးဆယ်လေးနှစ်တိုင် အစေခံ လျှက်အမှုတော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လူမြောက်များစွာတို့သည် နှလုံးသားထဲနာကျဉ်း ခြင်းဝေဒနာနှင့် အထီးကျန်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လူငယ်တဦးပြောကြားခဲ့သည် မှာ၊
တစုံတဦးလို အထူးအောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်ချင်ပါသည်၊ သို့သော် တဦးတယောက်ကမှ ကျွန်ုပ်အား ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တစုံတဦးက ကျွန်ုပ်အား သည်းခံလျှက် ဖေးမသူမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် မခံမရပ်နိုင်၍ အထီးကျန်နေရခြင်းဖြစ်၏ (quoted by Josh McDowell, The Disconnected Generation, Word, 2000, p. 11).
ထို့သို့သော ဝေဒနာကို ထောင်ချီသော လူငယ်များ ယနေ့ခံစားနေရကြပါသည်။ စိတ်ရောဂါကု ဆေးဆရာဝန် ဒေါက်တာလီယိုနာ ဇူနင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “လူတို့၏ အကြီးမားဆုံးပြသနာသည် အထီးကျန်ခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေကု သမားတော်၊ အဲရက်စ်ဖေါင်းပြောကြားသည်မှာ၊ “လူသားတို့၏ အလိုအပ်ဆုံးအရာသည် ခွဲခြားခြင်းအပေါ် အောင်မြင်ဖို့နှင့် အကျဉ်းထောင်ပမာ အိမ်တွင်း၌ အထီးကျန်စွာ ချုပ်နှောင်ခံရခြင်းမှ အောင်မြင်ရန်” လိုပါသည်ဟူ၍ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ကြီးထက် ပိုသော အထီးကျန်စေသောနေရာ မည့်သည့်အ ရပ်၌ပင် မရှိတော့ပေ။ စာရေးဆရာကြီး ဟာ့ဗက်ပရိုနိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ “မြို့ကြီးတမြို့၌ နေထိုင်သူတို့သည် အတူတကွ အထီးကျန်ဝေဒနာခံစားကြသည်” တရုတ်လူငယ်ကျောင်း သားတဦးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဘယ်သူကမှ ကျွန်ုပ်အားနားလည်မှုမပေးပါ၊ မနက်မိုး လင်းကတည်းက ညနေအိပ်ရာဝင်သည့်တိုင်အောင်၊ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဝေဒနာ ကျွန်ုပ် တကယ်ခံစားရပါသည်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ သင်လည်း အနည်းငယ်ခံစား ဖူးပါသလား¿ တစုံတဦးက သင့်အား၊ ဂရုမစိုက်ခဲ့ဟူ၍ သင်ခံစားခဲ့ဖူးပါသလား¿ တစုံတဦးက သင့်အား နားလည်မှုမပေးဘဲ၊ ဂရုဏာသက်ခြင်းမရှိခဲ့ဟူ၍ သင်ခံစားဖူး ပါသလား¿ လူအများထဲ၌ သင်သည် တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေပါသလား¿ လူငယ်အများတို့သည် ကုန်တိုက်သို့ ဈေးဝယ်ဖို့သွားရကြသည်၊ အခြားသောသူတို့ဆီသို့ လှည့်လည်သွားလာကြရသည်ဟု လူငယ်တို့၏ ပြောစကားကို ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းက သူတို့အား မသက်သာစေခဲ့ပါ! ပျော်ရွှင်နေကြသော လူအုပ်ကြားထဲ သူတို့သည် အထီးကျန်နေကြရသည်။ အခြားသော သူတို့ပျော်ရွှင် မြူးထူးနေချိန်တွင်၊ ထိုသူတို့သည် အိမ်အကျဉ်းထောင် အထီးကျန်နေခြင်းမှ မလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ကြပေ။
“လူငယ်များ အထီးကျန်နေခြင်း” အကြောင်းကို ဒေါက်တာလင်း မကြာခဏ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုဆရာသည် အထီးကျန် ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ကောလိပ်ပညာကို သင်ကြားခဲ့စဉ်၊ မိသားစုနှင့် ဝေးကွာသောကြာင့် ထိုသို့ အထီးကျန်ခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ဖူးပါသည်။ သင်လည်း ခံစားဖူးပါသလား¿ ထိုသို့ အမှန်တကယ် မလိုလားသော အရာအတွက် စိတ်မသက်သာ ဝေဒနာခံစားဖူးပါသလား¿
၁၈၉၉-၁၉၆၁ခုနှစ်တုန်းက၊ နိုဗယ်ဆုရှင် ကဗျာဆရာ အီးလ်နတ်ဟေမိန်ဝေက ငွေကြေးဖြင့် အရာရာကို ပေးဝယ်ခဲ့သည်။ ဂျွန်ကနေဒီက၊ ၎င်း၏သမ္မတမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ မိန်းခွန်းပြောကြားရန် ထိုကဗျာဆရာအား ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဟေမိန်ဝေမတက်ရောက်ခဲ့ပေ၊ အကြောင်းမှာ ထိုသူအား စိတ်အားငယ်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသူပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လှိုင်းအလောင်ခံ သူပမာ”အားငယ်ခံစားမိ၏ဟုဆို၏။ နောက်မကြာမှီ ထိုသူသည် မိမိကိုကို အသေခံခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မိသားစု အနောက် ဖလိုရီဒါပြည်နယ်၊ ကေမြို့၌နေစဉ်၊ ထိုသူ၏ ၇၅% ရေးသားထားသော ကဗျာနှင့် ဝတ္ထုတိုရှိရာနေအိမ်သို့ အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုစဉ် အီလီနာနှင့် ကလေးတို့သည် အခြားကို သွားခဲ့ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဟေမိန်ဝေ၏ နေအိမ်သို့ လှည့်လည်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်သည် မွန်းလဲပိုင်း၌ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံက ကျွန်ုပ်အား အေးစက်ကြောက်လန့်စေသည်။ ထိုအိမ် သည် စိတ်ဖိစီးခြင်းနှင့် အထီးကျန်ဝေဒနာခံရသူတို့၏ သမိုင်းဝင် နေအိမ်ဖြစ်နေပါသည်။ မာန်နတ်၏ ကြောက်လန့်စေသော အတွေးကို ခံစားရသည်၊ ထိုနေရာသည် မျှော်လင့်ရာ မရှိ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မရှိသော နေရာပင်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် အထီးကျန်ဝေဒနာကြောင့် ရူးသွပ်စေသည်ကိုလည်း သိခဲ့ရသည်။ နောက်မကြာမှီတွင် အီဒါဟိုခက်ချုန်း၌ မိမိကိုကို သေနတ်ဖြင့် နဖူး၌ အသေသတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပန်းဖြေခရီးထွက် သောအခါ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခတ်ချုန်းကိုလည်း ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မာန်နတ်၏ ဖိစီးမှုကြောင့် သူသည် အထီးကျန်ဝေဒနာခံစားပြီး၊ နောက်တွင် သူသည် အသေသတ်ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူ၏ အတ္ထုပတ္တိ၌ ပြောကြားသည်မှာ၊ “သူ့၏ ကြောက် လန့်ဖွယ်သွေးစွန်း အသေခံခြင်းသည် မေ့မရနိုင် ဖြစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်”ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ပါ သည်။ (Kenneth S. Lynn, Hemingway, Harvard University Press, 1987, p. 593). ကျွန်ုပ်လည်း ၎င်းအဖြစ်ပျက်ကို မေ့မရခဲ့ပါ။
မိမိကိုကို အသေသတ်ခြင်းသည်၊ အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အောက် လူငယ်များ သေဆုံးရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ နံပါတ်နှစ်၊ နေရာ ဖြစ်သည်ကို သင်သိပါသလား¿ ဟေမိန်ဝေကဲ့သို့ မိမိကိုကို အသေသတ်ခဲ့သော ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတဦး ကျွန်ုပ်၌ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ သူသည်လည်း သေနတ်ဖြင့် မိမိနဖူးကို ပစ်သတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နောက်တွင်၊ ထိုသူ၏ မိခင်က ကျွန်ုပ်အား မင်းဟာ ငါ့သား၏ သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ပါဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုသူအား ကူညီမစမှုမပေးနိုင်သဖြင့် ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲနာ ကျင်စွာခံစားရသည်။ ထိုသူကို ဘုရားကျောင်းသို့ မခေါ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သဖြင့်၊ သူ့ကို ကျွန်ုပ်သတ် မိဘိသကဲသို့ ခံစားရပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြုမှားခဲ့သော အမှားမျိုးနောက်ထပ်ဘယ်သူမှ မမှားကြပါနှင့်၊ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း နားထောင်ဖို့ ရန် ဘုရားကျောင်းသို့ တဦးတယောက်အား ခေါ်ဆောင်လာပါ! ထပ်ခါတလဲလဲပြော ပါမည်၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း နားထောင်စေဖို့ ဘုရားကျောင်းသို့ တဦးတယောက်အား ခေါ်ဆောင်လာပါ! သို့ပြုလျှင် သင်သည် ဘယ်တော့မှ နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်! “ယနေ့ တဦးတယောက်အား ကူညီပါစို့” ၎င်းဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်!
နွေးထွေးသော သူငယ်ချင်းမေတ္တာဖြင့် မစလိုက်ပါ
အို၊ ယနေ့ပင် ကူညီမစကြစို့!
(၁၈၅၅-၁၉၃၄ခုနှစ် ကေရီအီးဘရိတ်ရေးသား သီကုံး၍ သင်းအုပ်ဆရာမှ
ပြင်ဆင်သော” “အခြားသူကို ယနေ့မစပါကျူး” )။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာဂျွန်၊အက်စ်၊ ငယ်ရွယ်စဉ် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ။
ညအချိန်သည် လူငယ်လူရွယ်အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့အား လွှမ်းမိုးထားသည်၊ လူပြည့်ကြပ်နေသော အခန်းတစ်ခန်း၌ အခြားသောသူများ အပေါင်းအဖော်မပြုကြဘဲ ကျွန်ုfပ်အထီးကျန်ဆန်စွာ မတ်တပ်ရပ်လျှက် နေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီစဉ်သည် အခန်းနံရံကို လုံး၀ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိသည်၊ သို့သော် လုပ်ဆောင်စရာများကို ဘေးချိတ်ထား လျှက်၊ အခြားသောသူတို့နှင့် နက်ရှိုင်းစွာ မိတ်ဖွဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ သူငယ်ချင်းထက်နက်နဲ့သော ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တေ ခံစားကြရပါသည်။ (John.S Waldrip. Th.D., “Cure For the Lonely Heart,” May 2, 2004).
ဆာလံဆရာကြီးကဲသို့ မြောက်များစွာသော လူငယ်တို့သည်လည်း အထီးကျန်စွာ ဝေဒနာခံစား နေကြရသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်!
“အကျွန်ုပ်သည် လွင်ပြင်၌နေသော ဝံပိုကဲ့သို့ ၎င်းတော၌ နေသောဇီးကွက် ကဲသို့၎င်း ဖြစ်ပါ၏ ကျွန်ုပ်သည် အိမ်မိုးပေါ်မှာ တစ်ကောင်တည်းနေရသော ငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ စောင့်လျှက်နေရပါ၏” (ဆာလံ၁၀၂း၆-၇)။
“အခြားသောသူကို ယနေ့မစပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်!
-အထီးကျန် ဝေဒနာခံစားသူအား ယနေ့ကူညီပါ
နွေးဆွေးသော သူငယ်ချင်းမေတ္တာဖြင့် မစလိုက်ပါ
သို့သော်၊ ဘုရားသခင်က သင့်အား တစ်ကိုယ်တည်း၊ အထီးကျန်မဆန်စေလိုပါ။ ဧဒင်ဥယျဉ်ထဲ၌ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား “ယောင်္ကျားသည် တစ်ယောက်တည်း မနေကောင်း(ကမ္ဘာ၂း၁၈)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ၁၆၀၈-၁၆၇၄ခုနှစ် ခရစ်ယာန် ကဗျာ ဆရာ ဂျွန်မီလ်တန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အထီးကျန်ဆန်နေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်စိအမြင်မတော်သော၊ နံပါတ်တစ် အရာပင်ဖြစ်သည်” ဟူ၍ဆို၏။ ဤသည် ယနေ့မနေ့ကာ လအစဉ် မှန်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေ မည်ကို မလိုလားချေ။ ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်မှာ “ယောင်္ကျားသည် တစ်ယောက် တည်းမနေကောင်း” မိန်းကလေးများကိုလည်း ပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်! ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အထီးကျန်ဝေဒနာကို ကုစားဖို့ အချက်နှစ်ချက်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ သင့် ဝိညာဉ်အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့် တစိမ်းဆန်နေခြင်း အားကုစားဖို့ အလိုငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံ စေခဲ့ပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးတို့အပြစ်ထဲ ကျရောက်သောကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် တစ်စိမ်းဆန်နေကြရသည်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာကြရသည်။ အာဒံသည် ဘုရားသခင် အထံတော်မှ ပုန်းလျှက်နေသည် (ကမ္ဘာ ၃း၁၀)။ အာဒံနှင့်ဧ၀တို့ သည် အပြစ်ထဲကျရောက်သောကြောင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်တော်မှ နှင်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါ သည်။ ဘုရားရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းကို ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် မြတ်၌ မိန့်ကြားသည်မှာ၊ ထိုသူတို့၏ အပြစ်ကြောင့် လူသားထုတစ်ခုလုံး အပြစ်ထဲကျ ရောက်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်က သင့်အားမသေချာသူ၊ မရေရာ သူ အပြစ်သားဟုဆိုသည်။ အပြစ်က ဘုရားသခင်နှင့် ကွဲကွာစေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သင်တို့ ဒုစရိုက်သည် သင်တို့ကို ဘုရားသခင်နှင့် ကွာစေပြီ။ ကြားတော် မမူစေခြင်းငှါ သင်တို့အပြစ်သည် မျက်နှာတော်ကို လွှဲစေပြီ” (ဟေရှာယ ၅၉း၂)။
လူသားတို့သည် ဘုရားရှင်အတူမပါဘဲလျှက်၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာဖြင့် ယနေ့လှည့် လည်သွားလာနေကြရပါသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီအိပ်ခ်ျ၊ ဂျီဝေးလ်(၁၈၆၆-၁၉၄၆)ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ၊ “အကျွန်ုပ်အသက်သည် ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ၊ အထီးကျန်ဆန်နေပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းဟူ၍ မတွေ့ရ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြအနေ၌ သင့်အား ဘုရားသခင်မနေစေလိုပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်ပေါင်း သင်းစေလိုပါ သည်။ သင်နှင့် ဘုရားသခင်ကြား အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ မိန့်ကြားသည်မှာ၊
“အကြောင်းမူကား ရန်သူဖြစ်လျှက်ပင် ဘုရားသခင်၏ သားတော်အသေခံ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသည်မှန်လျှင်၊ မိဿာဟာယဖွဲ့ပြီးမှ၊ Tသက်တော် အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟု သာ၍မြော်လင့်စရာရှိ ၏” (ရောမ ၅း၁၀)။
သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ သင့် ကိုယ်စား အသေခံတော်မူပြီး ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အား ခွင့်လွတ်မည်ဖြစ်သည်၊ ထိုအခါ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်၍ သင့်မြတ်ခြင်း ကျေးဇူးကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်! ယေရှုသည် မပုပ်စပ်နိုင်သော ခန္တာကိုယ်ဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် သင့်အား ထာ၀ရအသက်ကို ပေးသနားမည်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုသခင်ထံ သင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါက၊ ကွဲကွာခဲ့သော ဘုရားသခင်နှင့် သင်အတူနေခွင့် ရရှိမည်ဖြစ် သည်။ ထာ၀ရအသက် ရယူလိုသော မည်သူကိုမဆို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ကျွန်ုပ်အသင့်ရှိ ပါသည်။ “အခြားသောသူအား ယနေ့မစ ကူညီပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆို ပါသည်!
အထီးကျန် ဝေဒနာခံစားသူအား ယနေ့ကူညီပါ
နွေးထွေးသော သူငယ်ချင်း မေတ္တာဖြင့် မစပါ
၂။ဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဆိုင်သော အထီးကျန်ခြင်းအား ကုစားရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေသန္တရ အသင်းတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီ။
သင့်အား ကယ်တင်တော်မူပြီး၊ အထီးကျန်ဆန်စွာဖြင့် ရက်စက်လွန်းလှသော ဤကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် ထားရစ်ဖို့ ဘုရားသခင် မလိုလားပေ။ ဘီလီဂရဟမ်၏ တရားဒေ သနာတော် အချို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ သို့သော် သူဟောသမျှသည် လုံလောက်မှု မရှိနိုင်ပေ။ ထိုဆရာကြီး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရ ယူပါ၊ ဝိညာဉ်အထီးကျန် နေခြင်းမှ သင့်အား ကယ်တင်ခြင်းရယူပါ၊ ဝိညာဉ်အထီးကျန် နေခြင်းမှ သင့်အား ကယ်တင်တော်မူပြီ၊ သို့သော် ထပ်ဖြည့်စရာလိုနေပါသည်။ ထိုအခါ ခရစ်တော်သည် သင့်အထဲသို့ဝင်တော်မူပြီး၊ သင့်ဝိညာဉ်အထီးကျန်ဆန်ခြင်းမှ ကုစားဖို့ ရန် ဒေသန္တာရ အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ပေးသည်ဟူသော အချက်လိုနေပါသည်။ ခရစ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏ ဤကျောင်းပေါ်မှာ ငါ့အသင်း တော်ကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကိုမရာဏာနိုင်ငံ၏ တံခါးတို့ သည် မနိုင်ရာ။” (မဿဲ ၁၆း၁၈)။
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ မိတ်ဿဟယရှိစေဖို့ အလို့ငှါ ဘုရားသခင်သည် ဒေသန္တရ အသင်းကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုအသင်းတော်၌ သင့်ဝိညာဉ် အထီးကျန်နေခြင်းမှ ကုစားရန်ဖြစ်သည်။ “အခြားသောသူတို့ကို မစကူညီပါ” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်၊
အထီးကျန် ဝေဒနာခံစားသူအား ယနေ့ ကူညီပါ
သင့်အထက်တန်း ကျောင်းသို့မဟုတ်၊ ကောလိပ်တခုပြီးသောအခါ အပေါင်းအဖေါ် များက “ပုံမှန်စာရေးဆက်သွယ်ပါ” သို့တည်းမဟုတ် “မကြာမှီဆုံတွေ့ကြပါစို့”ဟူ၍ နှုတ်ဆက်ပြီး ပြောလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်လာမည် တောမဟုတ်ပါ။ နောင်အနှစ်၄၀ သို့မဟုတ် အနှစ်၅၀တွင် ဆုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည် –အသိအမှတ်ပြုပြောဆိုဖို့ ကား၊ ခက်လှပါသည်! သို့ပါသော်လည်း ဒေသန္တရ အသင်းတော်၌ကား သင်ဘယ်တော့မှ ကျောင်းပြီးတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အသက်သေသွားရင်တောင် ပါရဒိသုဘုံ၌ တစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက်ပြန်လည် ဆုံဆည်းကြရအုံးမည် ဖြစ်သည်! ထို့အတွက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သီ ကုံးသော ဓမ္မသီချင်းကို မစ္စတာဂရိဖက်စ် မကြာခင်က သီချင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- မြို့တော်လူအများတို့က ကျွန်ုပ်အား လှစ်လှူပြု၏
ဂရုဏာတော်နှင့်မေတ္တာ စိုးစည်းမျှ မရှိကြ
သို့သော် ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်သောအခါ
အတူမိတ်ဖွဲလျှက်၊ ဒေသန္တရအသင်းတော်၌ စားလျှက်သောက်လျှက်
နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ကြားအတူ စားသောက်ရကြ!
(ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာ ဂျေအရ် သီကုံးသော ညနေစာသို့
ကြွလာပါဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို “ချိုးငှက်ငယ်တောင်ပံ”ဓမ္မသံစဉ် အတိုင်း ဆိုသည်)။
အတူမိတ်ဖွဲလျက် ဒေသန္တရအသင်းတော်၌ စားလျှက်သောက်လျှက်
နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ကြားအတူ စားသောက်ကြရ!
သို့သော်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်း တခဏာလာရောက်ခြင်းဖြင့် သင်၏ အထီးကျန် ဆန်ခြင်းအား ကုစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ! အို၊ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ! ထို့ကြောင့် များစွာသော အသင်းတော်တို့သည် ငယ်ရွယ်သော သူတို့အား မဆွဲခေါ်နိုင်ရခြင်းသည် တနင်္ဂနွေနေ့ည ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ မပါဝင်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်! ထိုသို့မိုက်မဲခြင်းကား စဉ်းစားမရဖြစ်နေသည်! ထိုသို့ဖြင့် ဂိုဏ်းဂဏာ အသင်းတော် တို့သည် အဓိက သောချက်ကို မမြင်နိုင်ကြခြင်းမဟုတ်ပါလား¿ ၎င်းက မက်သဒက် ဘာသာ ဝင်တို့အား သတ်ဖြတ်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သော နှစ်ခြင်းအသင်းတော် တို့သည်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး မပြုလုပ်သောကြောင့် လူအများကို သတ်ဖြတ်နေသည်! သင့်အသင့်တော်၌လည်း များစွာသောသူတို့အား သတ်ဖြတ်နေသည်၊ ထိုသို့ဆယ်စု နှစ်ပတ်လုံးများစွာသော သူတို့ကို သတ်ဖြတ်နေပါသည်။ လူငယ်များ တနင်္ဂနွေည နေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ လာရောက်ခြင်းမရှိပါက ထိုသူတို့၏ အထီးကျန်ဝေဒနာကို ကုစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသူတို့သည် စနေနေ့ည ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌လည်း လူထုပရိသတ်တို့နှင့်အတူ ရှိနေဖို့လိုပါသည်။ ဒေါက်တာလင်း ပြောနေကျစကားသည် “အသင်းတော်ကို ဒုတိယ မိသားစု ဖြစ်စေပါ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူပြောသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာလင်း သင်းအုပ်ဖြစ်သောအခါ၊ တရုတ်လူငယ်များစွာတို့သည် အသင်းတော်သို့ မစဲဝင်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်နိုးကြား သောအခါ၊ တရုတ်အသင်း တော်သည် ယေရုရှလင် အသင်းတော်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် “ဘုရားသခင်ကိုလည်း ချီးမွမ်း၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်း အခွင့်ကို ရ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော သူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏” (တမန်၂း၄၇)ဟူ၍ မိန့်တော် မူပါသည်။
နောင်ထပ်၍ ပြောလိုပါသည်၊ အကယ်၍ ဤအသင်းတော်၌ သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထီးကျန်ဆန်နေခြင်းအား ကုစားလိုလျှင် နောက်အပတ် သင့်နှင့်အတူ တဦးတယောက် ကို ခေါ်ဆောင်လာပါ! ဟုတ်ပါသည်! နောက်အပတ် သင်အသင်းတော်သို့ လာသော အခါ၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေတဦးကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါ။ တနင်္ဂနွေညနေ ဝတ်ပြုအ စည်းအဝေး၌ လူသစ်တစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါ! ထိုသို့ဖြင့် သင့်၏ အထီးကျန် နေမှုကို ကုစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တဦးတယောက်အား ခေါ်ဆောင်လာမည်ကို စဉ်းစား ထားပါ! ယေရှုတပည့်တော်တို့အား ဦးစွာလုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ငါနောက် သို့လိုက်လော့၊ ငါ့သည်လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေမည်”(မဿဲ၄း၁၉)၌ မိန့်တော်မူပါ သည်။ ဒီကနေ့၊ နေ့ခင်း၌ပင် ငါးမျှားဖို့ သွားကြပါ! သင့်မိတ်သင်္ဂဟတို့ကို ရှာဖွေပါ၊ ဒီကနေ့ည ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ခေါ်ဆောင်လာပါ။ သို့တည်းမဟုတ်၊ နောက်အပတ် နောက်ဆုံးထားပြီး၊ ခေါ်ဆောင်လာပါ! “လူကို မျှားသောတံငါဖြစ်စေမည်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။
ငါနောက်သို့ လိုက်လော၊ ငါနောက်သို့လိုက်လော့
(1888-1957? ဟန်နရီ.ဒီ.လာလက်စ် သီကုံးရေးသားထားသော
တပါးသောသူတို့အား အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အပူတပြင်းကြိုးစားသော အခါ သင်သည် အထီးကျန်ဆန်နေမည့် အချိန် သင်၌ မရှိတောပါ!
ဓ“ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါ မည်”ဟူ၍ မည်သူကတိပြု ပြောမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်လည်း အခြားတယောက်အား နောက်အပတ် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ခေါ်ဆောင်လာမည်ဟု မည်မျှသော သူတို့က ဝန်ခံကြမည်နည်း” ကျေးဇူးပြု၍ လက်မြှောက်ပေးပါ။ ဒေါက်တာ ချန်က ထိုသူတို့အဖို့ (ဆုတောင်း)ပေးပါမည်။ ဓမ္မသံပြိုင် သီချင်းသီဆိုကြစို့!
- လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေမည်
မွေးနေ့ပါတီသို့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ ဆင်နွဲပါဝင်ဖို့ အခြားတယောက်နှင့်အတူ အသင်းတော်သို့ တက်ရောက်ပါ၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၊ နားထောင်အပြီး၊ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာအတူ သုံးဆောင်ကြပါစို့! “အသင်းတော်မိသားစု” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ထပ်မံ၍ သီဆိုပါသည်!
အတူမိတ်ဖွဲလျှက် ဒေသန္တရအသင်းတော်၌ စားလျှက်သောက်လျှက်
ဘုရားသခင်၊ ထိုသူတို့ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မစပါ! ယေရှုနာမ၌ တောင်းလျှောက်ပါ၏ အာမင်၊ “အခြားသောသူတို့အားမစပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်!
အို ယနေ့ပင် ကူညီမစကြစို့!
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတ်တန် အယ်.ချန်မှ ဆာလံ၁၀၂း၁-၇ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ “အသင်းတော် မိသားစု” (ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာဂျေအာရ်က “ချိုးငှက်ငယ်၏ တောင်ပံ” ဓမ္မသီချင်းသံစဉ်အတိုင်း သီဆိုသည်။ (၁၈၈၈-၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဟန်နရီဒီကလက် သီကုံးသော တံငါဖြစ်စေမည် (၁၈၈၅-၁၉၃၄၊ ကေရီ.အီးဘရိတ်စ် သီကုံးသော “အခြားသော သူကို ယနေ့ကူညီပါ”ဟူ၍ ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“အကျွန်ုပ်သည် လွင်ပြင်၌နေသော ဝံပိုကဲသို့၎င်း တော၌နေသောဇီးကွက် ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏ အကျွန်ုပ်သည် အိမ်မိုးပေါ်မှ တစ်ကောင်တည်း နေရသော ငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ စောင့်လျှက်နေရပါ၏”(ဆာလံ၁၀၂း၆-၇)။
၁။ ပထမ၊ သင့်ဝိညာဉ်အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့် တစိမ်းဆန်နေခြင်း အားကုစားဖို့ အလိုငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခ စေခဲ့ပြီ။ ကမ္ဘာဦး ၃း၁၀၊ ဟေရှာယ၅၉း၂၊ ရောမ ၅း၁၀.
၂။ဒု တိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဆိုင်သော အထီးကျန်ခြင်းအား ကုစားရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေသန္တရ အသင်းတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီ။ မဿဲ၁၆း၁၈၊ တမန်၂း၄၇၊ မဿဲ၄း၁၉.